Taranja volley sy baskety: nankasitrahan’ny Seg ny GNBC sy ny GNVB | NewsMada
Taranja volley sy baskety: nankasitrahan’ny Seg ny GNBC sy ny GNVB
Nahomby tanteraka ny fifaninanana rehetra nandraisan’ny GNVB sy ny GNBC anjara, tamin’ity taom-pikatrohana ity. Nankasitraka izany ezaka vitan’izy ireo izany ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarmariam-pirenena.
Tonga teny Betongolo, nampiseho ireo amboara sy vokatra azon’izy ireo, nandritra ny taom-pikatrohana 2019, ny ekipan’ny basikety GNBC sy ny volley GNVB, omaly. Tamin’izany indrindra no nanoloran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Ravalomanana Richard, fankasitrahana ho azy ireo nitondra avo ny voninahitry ny zandarmaria, tamin’ny alalan’ny fanatanjahantena. Vola 2 tapitrisa ariary no natolony hifampizaran’ny ekipa roa tonta, nahazo tohana 2 tapitrisa ariary ihany koa tetsy ankilany, ny GNBC izay hiatrika ny fifaninanana “Africa League”, hanomboka amin’ny herinandro, eto Antananarivo. “Fandraisana anjara ho fanohanana sy fampirisihana ary fankasitrahana ny ekipan’ny zandarimaria fotsiny izao atao izao, saingy mbola hangatahana valiny avy amin’ny Minisitera tomponandraikitra sy ny federasiona, ny fandraisana an-tanana io lalao goavana tanterahina eto amintsika io”, raha ny fanazavan’ny Jeneraly Ravalomanana Richard. Ankoatra izay, tsy nanadino ireo mpilalao afa-panadinana ihany koa ny tenany, ka nanolotra 1 tapitrisa ariary ho azy ireo. Mpilalao fito amin’ny valo no afaka bakalorea, ho an’ny GNVB, raha toa ka afaka avokoa ireo mpilalao enina nanala ny fanadinana BEPC.
Tsiahivina, ho an’ny ekipan’ny volley, GNVB, fandresena 13 no azony tamin’ity taona ity ary tsy mbola resy mihitsy izy ireo, tamin’ny fifaninanana izay natrehiny. Ho an’ny GNBC kosa, izy hatrany no nandrombaka ny tompondaka nasionaly, andiany voalohany, tany Antsiranana sy ny andiany faharoa natao teto Antananarivo. Nambaran’ny mpanazatran’ny GNBC fa vita iny ny fifaninanam-pirenena fa hiditra amin’ny sehatra afrikanina indray ny mpilalao, amin’ny herinandro ka mampanantena ny hanome ny tsara hatrany. “Goavana be ity Africa League hatao eto amintsika ity ka ilàna rindran-damina vaovao, isan’izany ny fitadiavana mpanohana, ny fanamafisana ny teknikan’ny mpilalao miaraka amin’ny federasiona ary ny fiantsoana mpilalao sivily hanatevin-daharana”, araka ny nohamafisin’ny mpanazatran’ny GNBC, Raharidera Lova.